Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinti Shirweyanaha J/Ogadaniya ee Pacific iyo Muuqalo halkan ka daawo
Warbixinti Shirweyanaha J/Ogadaniya ee Pacific iyo Muuqalo halkan ka daawo
Posted by ONA Admin	/ March 31, 2013
Shirweynihii 7aad ee Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee wadamada la isku yiraahdo Pacific ayaa maanta ka furmay magaalada Melbourne ee wadanka Australia. Shirkan oo aad loosoo aggaasimay waxaa marti sharaf ahaa oo lagu soo casuumay madax sare oo kamid ah Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya. Madaxdaas ayaa waxaa Hoggaaminaya Gudomiye ku xigeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Dr Maxamed Ismaaciil waxaana ku wehelinaya Afahayeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Mudane Cabdiqadir Sheekh Maxamed Hirmooge iyo waliba madax kale oo kamid ah golaha dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya uu kamid yahay Mudane Maxamed Ibrahim. Sidoo kale waxaa shirkaas lagu soo casuumay siyaasiyiin iyo aqoonyahan waxgaradka Somaliyeed ee ku nool wadankaas iyo dad ehel u ah qadiyada Ogadeniya.
Filmki Muuqaladi Shirka
Shirkan oo xamaasad kulul iyo shacni aad u qurux badan ku bilowday ayaa lagu furay aayadaha Quraanka Kariimka ah iyo Heesti Calanka qaranka Somalida Ogadeniya. Halkaas oo dad ku labisan calanka Ogadeniya ay hal mar isla wada qaadeen anthemka Calanka Ogadeniya iyaga oo u taagan.
Kadib waxaa lagudagalay warbixihiii ay Jaaliyadaha Ogadeniya ee Pacifiga kaga waramayeen waxqabadkii iyo howlihii ay lasoo darseen sanadkii lasoo dhaafay. Waxaana lagu bilaabay oo furey Mudane Xikim Cabdi oo ah gudooimiyaha Jaaliyada Victoriya oo aheyd iyadu jaaliyada Martida loo yahay ee shirkan soo aggaasintay. Waxa uuna Gudomiyuhu ka warbixiyay waxqabadkii iyo marxaladihi Jaaliyadu soo martay sanadkii lasoo dhaafay midaas oo aad loogu riyaaqay guulo badana laga soo hooyay.
Waxaa ku xigay oo ka waramay maamuladi kale ee Jaaliyadaha oo halkaas iyana waxqabad aad loogu diirsaday kasoo jeediyay
Gudomiyaha Jaaliyada Sydney Mudane shugri shafeec
Gudomiyaha Jaaliyada Queensland Mudane Hikim Sheekh
Jaaliyada Adelaide oo uu u hadlayAxmed Halgan iyo
Gudomiyaha Jaaliyada Perth Mudane Kaldeeq Samatar oo dhamaantood kawaramay waxqabadkii Jaaliyadahaas iyaga oo sidoo kale soo jeediyaya talooyin iyo waxqabad ku dayasho mudan.
Sidoo kale kulankan Jaaliyadaha Ogadeniya oo qeybaha bulshada oo dhan ay kasoo galaan ayaa waxaa dadkii ka hadlay kamid ahaa Odeyaasha dhaqanka oo uu u hadlay Cabdi Macalin Ibraahim isaga oo halkaas ku dhiiri galiyay in Jaaliyadaha Ogadeniya waxqabadka wanaagsan ay hayaan sii laba jibbaaraan.
Dhanka Abaabulka iyo Suugaanta;
Shacabka Ogadeniya oo ah dad halgan ku jira ayaa caan ku ah in markatsa oo ay isu yimaadaan isku guubaabiyaan gabayo iyo fan suugaaneed kor loogu qaadayo wacyiga bulshada.
Suhuur Muxumed Dariiq oo ah gabadh da ‘yaro jirta 11 sano ayaa halkaas ka tirisay gabay qiiro badan oo xamaasad iyo shucuur galisay dadkii kasooqeyb galay shirkaan. sidoo kale waxaa halkaas gabayo kasoo jeediyay Abwaan Kaldeeq Samatar. Waxaa iyana xiiso gooni ah lahaa mada daaladi iyo heesihii tilmaanta badan lahaa ee ay soo bandhigeen Abwaan James Dariiq iyo Kooxdisa Halgan.
Shirkan mudnaanta weyn leh ayaa ka dhacay receptionka caanka ah ee Leyla reception Melbourn.